Kabary : namoaka ny « Tandroka » ny Ampinga | NewsMada
Kabary : namoaka ny « Tandroka » ny Ampinga
Tontosa, ny alahady teo teny amin’ny kianja maitso Analamahitsy, ny famoahana tamim-pomba ofisialy ireo mpianatra kabary, eo anivon’ny fikambanana Ampinga. Teo koa ny fanolorana « certificat » azy ireo.
Misalotra ny anarana « Tandroka » ity andiany ity, ahitana mpianatra miisa 300.
Mizara sokajy telo izy ireo : ny mpianatra, ny mpandalina (miisa 20) ary ny mpampianatra (miisa dimy). Avy amin’ny foibe fampianarana miisa efatra ireto andiany « Tandroka » ireto : ny eny Alarobia, eny Ampefiloha, eny Imerinafovoany ary ny eny Ambohimangakely. Naharitra enim-bolana ny fianarana, izany hoe, tamin’ny volana novambra 2017 no nanomboka ny fanofanana azy ireto.
Teny fanevan’ny fikambanana Ampinga ny hoe « Hampandroso hatrany ifotony ny teny sy ny soatoavina malagasy ». Araka izany, ankoatra ny fianarana kabary, manatsara ny fifehezan’ny mpianatra ny tenindrazana ny fikambanana ary mampianatra na mampahatsiahy indray ireo soatoavina mampiavaka antsika Malagasy.
Nambaran’ny filohany, i Manampisoatoavina Lalaina Mitahiry Fahendrena, fa ny volana novambra no hiditra ny andiany manaraka. Ao anatin’ny vinavinan’ny fikambanana ny hanampy isa ny foibe fanofanana, izay ho fantatra atsy ho atsy.